अविवाहित महिलाप्रति घर परिवार अनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण निकै नै साँघुरो छ : बबिता पोखरेल « Swadesh Nepal
अविवाहित महिलाप्रति घर परिवार अनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण निकै नै साँघुरो छ : बबिता पोखरेल
अविवाहित महिला विश्वका सबैभन्दा खुसी मानिसमा पर्दछन हालसालै वैज्ञानिकहरुले गरेको एक नयाँ अनुसन्धानमा पनि बाल बच्चा नभएका अविवाहित महिलाहरु विश्वका सबैभन्दा खुसी मानिसमा पर्ने देखाएको छ ।
– बबिता पोखरेल
यही समाजमा जन्मेकी,यही समाजमा हुर्केकी बढेकी अनि यही समाजमा बाँचिरहेकी यही समाजले बनाइदिएका र तोकिदिएका नियमकानूनलाई मान्दै आफ्नो जीवनलाई अघि बढाइरहेकी ४० वर्षिय एक अविवाहित साधारण नेपाली नारी हुँ म । मेरो नाम बविता पोखरेल हो । अविवाहित महिलाहरूले समाजमा धेरै किसिमका लाञ्छना सहनुपर्छ । हरेक कुराका दुई पाटा हुन्छन् । सबै विषयमा नकारात्मक पक्ष र सकारात्मक पक्ष बराबर हुँदैनन् । कुनै विषयको सकारात्मक पक्ष बढी हुन्छ भने कुनै विषयको नकारात्मक । कसले के कुरालाई बढी महत्व दिएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । के अविवाहित रहनु अभिशाप हो वा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो हो रु अविवाहित रहर हो कि बाध्यता रु यिनै विषयमा मैले थोरै चर्चा गरेकी छु ।
जीवन बाँच्न साथीको आवश्यकता पर्छ, किन एक्लै जीवन बिताउने ? भन्नेहरू पनि यहा धेरै छन् । तर जब बाँच्नलाई एक्लै बाँच्छु भन्ने लाग्छ भने किन कसैको करकापमा आएर विवाह गर्नुपर्यो र? हाम्रो समाजमा प्रतिष्ठित अविवाहित महिलाहरू पनि नभएका होइनन् । राजनीति, कलाकारिता, पत्रकारिताजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा रहने अविवाहित महिलाहरूलाई पक्कै पनि आफ्नो स्थान बनाउन कठिन भयो होला । दुई दिनको जिन्दगी हो, जसलाई जसरी सहज हुन्छ उसले त्यसैगरी बाँच्न पाउनुपर्छ । यद्यपि यो समाजमा अविवाहित महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । ती महिलाहरूमाथि समाजले अनेक प्रश्न उठाउँछ । किन विवाह नगरेकी ? तिमी एक्लै कसरी बाँच्छ्यौ ? गह्रो हुदैन ? बुढेसकालमा के गछ्र्यौ ? मरे पछि क्रिया कस्ले गर्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु मेरो जीवनमा पनि नआएका होइनन् । त्यसलाई सहज ढंगमा लिएर समाजको यही गलत सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै पुरुषबिनाको एक्लो जीवन अधूरो हुन्छे भन्ने मान्यतालाई गलत साबित गर्न यहाँ सम्म आएकी छु । जीवनको अविरल यात्रा एक्लै पनि पार गर्न सकिन्छ भने किन बाँधिनुपर्यो बन्धनमा रु जन्मिनु, विवाह गर्नु, सन्तान जन्माउनु मात्र हो जीवन रु अवश्य होइन । त्यसैले म भन्छु अविवाहित रहनु रहर हो अभिशाप होइन ।
वास्तमा जसले जसरी बुझे पनि जसरी व्याख्या गरे पनि अविवाहित रहनु आफैमा चुनौती हो । मेरो ३ दिदी २ दाजु र १ बहिनी छन् । म सात सन्तान मध्येकी छैठौमा पर्छु । मलाई मेरो परिवारले विवाह गर्नु पर्छ वा विवाह नगर भनेर दवाव पनि दिएका छैनन । मैले विवाह गरिन मलाई अंश चाहियो भनि मैले कहिले आवाज पनि उठाइन र उठाउदिन पनि बरु कहिले काँही आफुले सकेको केही सहयोग गर्दै आएकी छु । घरमा अभिभावकहरुले पनि यो उमेर सम्म यसले विवाह गरिन यसले पाउने अधिकार हामीले दिनु पर्दछ भन्ने भावना व्यक्त गरेको छन् । मेरो ठाँउमा छोरो भएको भए सायद उसले पाउने अधिकार उ जसरी भए पनि लिई सक्थ्यो र दिनेले पनि दिई सक्थे यसैबाट स्पष्ट हुन्छ की हाम्रो नेपाली समाज अहिले पनि छोरा र छोरीको मतभेदमा अल्झिएको छ । यो सबै आफैमा भर पर्ने कुरा हो । छोरी नै भए पनि छोरा सरह केही गर्न सक्छु भन्ने आँट हिम्मत गर्न सके समाजमा जे पनि गर्न सके समाजमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास लिएर अघि बढने प्रयास गरेकी छु । धेरै तिरबाट विवाहको कुरा आए धेरै विवाहको कुरा गरे पनि मलाई खासै प्रभाव परेन । अविवाहित त्यो व्यक्ति मात्र बस्न सक्छ जसको आत्मा विश्वास र आत्माबल बलियो हुन्छ । देखासिकीका आधारमा विवाह गर्दिीन भनेर बस्नु हुदैन यदी त्यसरी बसे व्यक्तिको जीवन घर न घाटको हुन्छ ।
यसको लागि कोही जन्मेको पनि रहिन्छ जानु नि एउटासंग पोइल जस्ता तिखा शब्दले बाण पनि हाने गर्दछन्
म भन्छु जुन कुराको लागि पनि मनबाट आँट र हिम्मत आउनु पर्छ । यदी आँट अनि हिम्मत भए एक्लै बाँच्न सकिन्छ । मेरो आमा अनि ठुली आमा भन्नु हुन्छ बरु कुनै धार्मिक संस्थामा गएर बस तर अब विवाह नगरे पनि हुन्छ । मैले उहाँहरुकै प्रेरणाले अविवाहित बस्ने अठोट गरे । गितामा लेखिएको छ की जे भो राम्रै भो जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ । भविष्यका बारेमा सोचेर चिन्तित हुनुहुदैन चिन्ताले मान्छेलाई चितामा पु¥र्याउ छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । त्यसैले बितेका दिनमा के भयो विगतमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार्ने र वर्तमानमा रमाउन सके जीवनयापन गर्न कठिन हुदैन सहज तरिकाले जीवन यापन गर्न सकिन्छ । समाजमा यस्ता धेरै महिला देखेकी छु जो विवाह गरेर पछुताइरहेका छन् । सबैलाई त्यस्तै हुन्छ भन्ने पनि होइन । विवाह आफ्नो इच्छामा भर पर्ने कुरा हो । एक्लै पनि जिउन सकिन्छ । विवाह बन्धनमा बाँधिनै पर्छ भन्ने छैन । अविवाहित बस्दा धेरै कुराको सामना गर्नुपर्छ यही समाजको मुख टाल्न र आफु माथी आई परेका चुनौतिहरुलाई पन्साउन र प्रश्न माथि खण्डा भएको अर्को प्रश्नको अन्त्य गर्न एक ताका त मैले अनाहकमा आफुले विवाह गरेको हल्ला समेत फिजाए । त्यस कुराले केही समय मलाई आत्मा गलानी समेत भयो तर त्यो बनावटी कुराले मलाई एक आत्माबल हिम्मतवाल केटी बनाएर खण्डा गरेको छ । अहिले म पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छु । साहसी महिलाहरू एक्लै पनि बाँच्न सक्छन् । अविवाहित महिला अपवादमा पर्छन् हिजोका दिन मेरा लागि पक्कै पनि सहज थिएनन् । हाल म काठमाडौमा साधारण कुनै काम गरेर आफ्नो जीवीको पार्जन गर्दैछु । मैले घमण्ड गरेको होइन म मेरो जीवन प्रति सन्तुष्टी छु । जन्मिनु, विवाह गर्नु, सन्तान जन्माउनु मात्र हो जीवन रु अवश्य होइन । जीवनको अविरल यात्रा एक्लै पनि पार गर्न सकिन्छ भने किन बाँधिनुपर्यो बन्धनमा र?
हिजोका दिन मेरा लागि पक्कै पनि सहज थिएनन् । हिजो छोरी रजस्वला नहुँदै कन्यादान गर्न पाए आमाबाबुले मोक्ष प्राप्त गर्छन् भन्ने संस्कार थियो । हामी महिलामा पुरुषमा भन्दा बढी सहनशीलता, लगनशीलता, धैर्य, इमान्दारिता एवं आत्मविश्वास हुन्छ । अविवाहित रहँदा स्वतन्त्रता हुन्छ, सबै निर्णय आफैले गर्न पाइन्छ, स्वनिर्भर भइन्छ भने समाजप्रति जिम्मेवारीबोध पनि हुन्छ । मेरो जीवनबाट म आनन्दित छु यसमा कुनै शंका छैन । समाजमा विभिन्न आरोप–प्रत्यारोपबीच अविवाहित महिलाहरूले धेरै किसिमका लाञ्छना सहनुपर्छ । जीवन जिउन साथीको आवश्यकता पर्छ, किन एक्लै जीवन बिताउने रु भन्नेहरू पनि धेरै छन् । आज आम नेपाली नारी विभिन्न युग र शताब्दीको कालखण्ड पार गर्दा पनि पित्तृसत्तात्मक सोच र चिन्तनको सङ्कुचित घेराबन्दीबाट उम्किन सकेका छैनन् ।
जीवनको अविरल यात्रा एक्लै पनि पार गर्न सकिन्छ भने किन बाँधिनुपर्यो बन्धनमा ? समाज सेवा गरी अन्याय एवं अराजकताविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू कहिल्यै एक्ला हुँदैनन् । त्यसैले अविवाहित रहनु रहर हो अभिशाप होइन । हुनत अविवाहित नारीलाई घर अनि समाजले हेर्ने दृष्टीकोणमा पनि फरक पर्दछ । विषेशतः आफ्नो दाई भाईका लालाबाला जन्मे देखी हुर्काउने, हेर्ने, दिशा पिसाब स्याहारिदिने त्यही अविवाहित नन्द आमा नै हुन्छे तर पनि ऊ क्रमशः आफ्नै जन्म घरमा पनि ऊ विस्तारै अपमानित हुन थाल्छे । यसलाई अंश दिनु पर्छ यसले पनि हामी बराबर अंश लाने भई अब भन्ने एक प्रकारको डर भय त्रास हुन्छ दाजु भाईमा हुन्छ भने भाउजु बुहारीबाट अनेकौ अपशब्दहरु पनि सुन पाइन्छ अंश खान विहे नगरी बसेकी यसको लागि कोही जन्मेको पनि रहिन्छ जानु नि एउटासंग पोइल जस्ता तिखा शब्दले बाण पनि हाने गर्दछन् । तर म भन्दछु भोलीको भविष्य कसले पो देखेको छ । के थाहा त्यही अविवाहित नन्दले,आमाजुले भाउजु बुहारीको हेरचाह गर्नु पर्दछकी ? अविवाहित महिला प्रति घर परिवार अनि समाजले हेने हेर्ने दृष्टिकोण नै साँघुरो छ ।
पुरुषबिनाको एक्लो जीवन अधूरो हुन्छे भन्ने मान्यतालाई गलत साबित गर्न यहाँ सम्म आएकी छु ।
कहि न कहिबाट समाज र घर परिवारले दुर्वल नै मानिरहेकै अवस्था छ । हो समाज बदलिएको छ व्यवस्था बदलिएको छ तर पनि अविवाहित नारीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण खासै बदलिएको देखिदैन हामी अविवाहित नारीले अझै पनि घर अनि समाज भित्र धेरै चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । पहिलेको तुलनामा केही समानता त छ तर पनि न्यायोचित रुपमा अविवाहित नारीहरुको लागि कार्यनिती नै बनेको छैन । त्यसैले अविवाहित महिलाका हकमा राज्य पक्षले पनि केही निति नियमहरु तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ जसको कारणले हामी जस्ता अविवाहित नारीलाई कुनै पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तत्वहरूले खासै असर पार्दैन । हरेक क्षेत्र पेशा व्यवसायमा अविवाहित नारीहरुलाई मान्यता दिनु पर्छ । वास्तवमै अविवाहित नारीले पनि यो सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले सबभन्दा पहिले अविवाहित नारीहरूले आफ्नो मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ । कमजोर मानसिकताबाट सधैँ टाढा रहेर अगाडि बढेको खण्डमा अविवाहित नारीहरू पनि समानरूपमा सबै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छन् यसमा दुईमत छैन ।
अविवाहित महिला विश्वका सबैभन्दा खुसी मानिसमा पर्दछन हालसालै एक नयाँ वैज्ञानीकले गरेको एक अनुसन्धानमा पनि बाल बच्चा नभएका अविवाहित महिलाहरु विश्वका सबैभन्दा खुसी मानिसमा पर्ने देखाएको छ । शीर्ष मनोविश्लेषकहरुको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । एक्लो जीवन बिताइरहेका र बालबच्चा नभएका महिलाहरु घरेलु जिम्मेवारीको बोझ उठाइरहेका आफ्ना साथीहरुको तुलनामा अधिक स्वस्थ र लामो जीवन जीउने गरेको वेल्सस्थित प्रोफेसर डोलानले बताएका हुन् । डोलान ‘लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिस्क’ मा यवहारिक विज्ञानका शीर्ष विश्लेषक हुन् । यस्तोमा सबैभन्दा पछिल्लो डाटाले पनि ‘खुसी रहन र सुखी जीवन बिताउन विवाह र मातृत्व जस्ता सामाजिक सफलताका पारम्परिक उपाय नै अपनाउनु पर्छ भन्ने जरुरी नभएको’ संकेत गरेको उनले बताए । यी विषयहरु खुसी जीवनको स्तरसँग सम्बन्धित नहुन पनि सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार एक्लो रहनु सम्बन्धी समाजको नकारात्मक धारणाले गर्दा नै आज धेरै महिलाहरु बेखुसी छन् । उनले धेरै अभिभावकहरुसँगको आफ्नो खुलस्त अन्र्तक्रिया र विवाहबारे सामान्य अवस्थामा अध्ययन गरेपछि यस्तो तथ्य फेला पारेको बताएका हुन् । यसरी महिलाहरुमा एक्लो जीवन बिताउनुका फाइदाबारे यो पहिलोपटक उल्लेख गरिएको होइन । यसअघि पनि मनोविश्लेषकहरुले यस विषयमा प्रकाश पारिसकेका छन् । केही समय अगाडिमात्र इतिहासविद् डाक्टर बब निकोल्सनले १८८९ को टिट–बिट्स म्यागजिनको कपी ट्वीटरमा पोस्ट गरेका थिए जुन १९ औँ शताब्दीमा एक्ला महिलाहरुले कस्तो महसुस गरिरहेका छन् भन्नेबारे रहेको थियो । यसमा ‘तपाईँ उमेर कटिसकेपछि पनि किन एक्लो हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरिएको थियो । जसको जवाफमा त्यस बेलाका थुप्रै महिलाहरुले आफू एक्लो जीवनमै धेरै रमाउने गरेको भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया दिएका छन् ।